Uhlu lwamahhala nolubuyekeziwe lwe-IPTV | ListaIPTVtelevision.com
I-Latin IPTV M3U
Wena Player TV
Uhlu lwamahhala nolubuyekeziwe lwe-IPTV
Obunye bobuchwepheshe obushintshe indlela esidla ngayo okuqukethwe kokuzijabulisa i-IPTV.
Uhlu oludumile lweziteshi ze-IPTV lwamahhala lungolunye lwezinhlobo zamafayela eziseshwe kakhulu ngo-2022. Futhi ngesizathu esihle.
Landa izinhlu zamahhala LAPHA
I-IP TV protocol (efushanisiwe njenge-IPTV) Kuyinkundla ekhombisa izinzuzo eziningi kunomabonakude wendabuko, ngisho nethelevishini yesathelayithi.
Ukwenza uqonde izinzuzo zayo futhi sikubonise ukuthi ungaluthola kanjani uhlu olubuyekeziwe, ukuthola iziteshi ezivela eSpain noma isiLatini esithile, kanye nokwazi iyini le sistimu ku-Smart TV yakho noma i-PC, sithuthukise ukwaziswa okulandelayo.
Iyini i-IPTV futhi isebenza kanjani?
I-IPTV iwuhlelo lokusabalalisa izinto ezilalelwayo nezibukelwayo olusebenzisa ithuba lomkhawulokudonsa ukudlulisa okuqukethwe.
Ngokungafani nokusakaza nge-OTT (Over The Top), i-IPTV isebenzisa umkhawulokudonsa ozinikezele ngokukhethekile ngale njongo, ukuze iziteshi zibe nesivinini esibuyekeziwe, ukuze kungabikho ukulengiswa okungazelelwe noma ukusikeka ekudluliseni.
Unyaka wezi-2022 kube unyaka wokuhlanganiswa kwalolu hlobo lwesikhulumi, cishe ngaso sonke isikhathi sihambisana nesevisi ye-intanethi ukuze isebenze ngendlela efanele, njengoba ku-bandwidth yalezi zinhlelo ze-inthanethi ezithuthukiswayo.
Ngaleso sizathu, Umabonakude we-IPTV uvamise ukunikezwa mahhala ngokuhambisana nohlelo lwefiber, futhi kuye ngesivinini sohlelo, uzokwazi ukukhetha ukuthi ube nencazelo evamile (i-SDTV) noma incazelo ephezulu (i-HDTV) eziteshini zakho nakuhlelo lwakho oluphelele.
Ubuchwepheshe be-IPTV eSpain abuqali, futhi sekuneminyaka ethile kunezinkundla ezizame ukunikeza uhlu oluphelele lwezinhlelo, cishe njalo ngenkokhelo.
Okwamanje, I-Movistar+ iyisibonelo esihle kakhulu se-IPTV eSpain, ukugqama eziteshini zokudlulisela zemicimbi ekhethekile, njengePartidazo ethandwayo.
Kodwa-ke, njengoba sesishilo kakade, akubona ubuchwepheshe obuqala ukusetshenziswa ezweni, noma kuyo yonke i-Latin conglomerate.
I-Jazztel yayingomunye wamavulandlela, kanye ne-Movistar, yalobu buchwepheshe eSpain. I-Jazztel TV ne-Yacom bekuyizinsizakalo ezimbili zikamabonakude ze-inthanethi, nakuba zingasekho.
E-Latin America, i-Movistar Chile kanye ne-ETB (Colombia) yizinkampani ezimbili ezenze ukuzibophezela okukhulu kulobu buchwepheshe obukude, esizocubungula izinzuzo zabo kumsebenzisi. Yebo, kuwe.
Izinzuzo zesistimu namuhla
Le nkundla ekude yokubuka umabonakude ngo-2022, ene-boom enkulu kuma-Smart TV kanye nama-PC, inezinzuzo eziningi okufanele sizibuyekeze, njengoba lezi yizo ezenza abantu abaningi babe nentshisekelo ezinsizeni ze-IPTV, noma bafake izinhlelo zokusebenza kuzo. buka uhlu lweziteshi ngo-2022.
Okuqukethwe kuwo wonke amadivayisi
Enye yezinzuzo ezibalulekile zalobu buchwepheshe obukude ukuthi, ngenxa yokuthi busekelwe kumkhawulokudonsa, bungatholwa futhi budluliselwe ngendlela efanele kunoma iyiphi idivayisi exhunywe ku-inthanethi.
Futhi hhayi kunethiwekhi yasekhaya, ngoba izinsiza eziningi zinezimpawu ngezinhlelo zokusebenza zeselula ezibuyekeziwe ezingasetshenziswa nohlelo lwedatha yeselula. Nakuba kunganconywa ngenxa yokusetshenziswa kwedatha yalezi zinhlelo zokusebenza ezibuyekeziwe.
Ngokuqinisekile kungenzeka buka okuqukethwe ngeSpanishi, isiLatini iSpanishi noma isiNgisi, okuqukethwe okukhethekile kanye kwanoma yiluphi uhlobo ku-Smart TV, kuselula ye-Android noma ye-iOS, noma kuhlelo lwe-PC, kuyinzuzo okufanele uyizame.
Okuwukuphela kwenzuzo akukona ukuthwala izinhlelo ezikude, yonke indawo nakuwo wonke amadivayisi.
Inzuzo ebalulekile ye-IPTV, ikakhulukazi ngo-2022, ithuba lokufinyelela iziteshi nokuqukethwe okukhethekile. Futhi hhayi iziteshi ezixekethile, kodwa qedela izinhlu zezinhlelo ze-IPTV.
Futhi nakuba kuyizinkundla zokukhokha, zinikeza okuqukethwe okungenakubonwa kwenye indawo, njengamaligi abaluleke kakhulu emhlabeni webhola likanobhutshuzwayo, isibonelo. Kodwa ngaphezu kwalokho, sinolwazi oluhlukile lwezwe ngalinye, sikushiyela izixhumanisi ngokuchofoza ifulegi lezwe olifunayo ngezansi:
Uhlu lwe-IPTV m3u lwase-Argentina Lumahhala futhi Lubuyekeziwe
Uhlu lwe-IPTV m3u lweBrazil Lumahhala futhi Lubuyekeziwe
Uhlu lwe-IPTV m3u lwe-Chile Yamahhala futhi Yabuyekezwa
Uhlu lwamahhala nolubuyekeziwe lwe-IPTV m3u lwaseColombia
Uhlu lwe-IPTV m3u lwase-Ecuador Lumahhala futhi Lubuyekeziwe
Uhlu lwe-IPTV m3u lwaseSpain Lumahhala futhi Lubuyekeziwe
Uhlu lwe-IPTV m3u lwaseMexico Lumahhala futhi Lubuyekeziwe
Uhlu lwe-IPTV m3u lwase-USA lwamahhala futhi lubuyekeziwe
Ngakho-ke, uma ungumuntu othanda iziteshi ze-anime zaseJapan, i-cinema yesiLatini, noma uhlu olubuyekeziwe lwe-IPTV lokubuka ibhola Ngesizini ka-2022 yalabo abanemvume yokusakaza ngale ndlela, ubuchwepheshe be-IPTV obukude buyisixazululo, ngoba ngeke nje ube nokufinyelela kukho konke okuqukethwe okukhulunywe ngakho inqobo nje uma une-premium ye-Movistar + futhi uyikhokhele, isibonelo, kodwa ngo-2022 lobu buchwepheshe obukude bungaba mahhala. Yebo, mahhala inqobo nje uma kusemthethweni ezweni lakini futhi okuqukethwe kuvuliwe futhi amalungelo abelwe ukuze wenze kanjalo.
Ukunikezwa okungenamkhawulo cishe
Izipesheli zikamabonakude ze-IPTV ezisesikhathini samanje zinokuthile okufanayo: izinhlobonhlobo ezingakaze zibonwe.
Izinhlelo ezikude zinikeza izinzuzo ezinjengokukwazi ukubuka zonke iziteshi zendawo noma zesifunda, noma isiphi isiteshi sesiLatini, iziteshi ezivela e-United Kingdom noma e-United States, nanoma yiluphi uhlelo lwethelevishini e-Europe nase-Asia.
Imikhawulo yokuzijabulisa isethwe nguwe.
Uhlu lwamahhala lwe-IPTV lungamafayela e-PC nama-Smart TV (futhi ngokuvamile, ezinhlelweni ze-IPTV) ezigcina ulwazi oluphelele lokuqukethwe ngokusakazwa (amaseva akude) wamashaneli kamabonakude ahlukene.
Inzuzo yalolu hlu ukuthi lugcina ulwazi olubuyekeziwe lwamashaneli amahhala, kodwa futhi lweziteshi ezikhokhelwayo inqobo nje uma unamalungelo okwenza kanjalo nezinye ezifana nalezi:
Uhlu Lweziteshi Zabantu Abadala
Kusukela emidlalweni efana nebhola, i-UFC noma i-basketball
Ukuze ubone i-Movistar Plus uma une-Movistar + Premium
Uhlu lwakho konke okuqukethwe kwe-premium uma ungumnikazi wamalungelo
Ngaleyo ndlela, ungaba ne-Movistar+ ye-PC inqobo nje uma ukhokhela ukubhalisa kwakho ku-Movistar, iziteshi ze-movie yesi-Latin (noma yisiphi isiteshi sesi-Latin), nanoma yikuphi ukuhlela okukhethekile kumadivayisi akho.
Lawa mafayela anolwazi lokuhlela angaphakathi ifomethi ye-m3u, futhi zilayishwa ezinhlelweni ezidlala okuqukethwe kukamabonakude nge-Internet Protocol IP, okuyi-VLC, noma I-SSIPTV yekhompyutha nohlu lwayo olubuyekeziwe zithandwa kakhulu, nakuba muva nje liyadlondlobala I-Wiseplay.
*Ezinye izixhumanisi ngenxa yenani elikhulu lethrafikhi engenayo zingase zingasebenzi okwamanje, zizame zonke. Le enenkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka isebenza njalo. Ukugcina ukuzinza kwezixhumanisi isikhathi eside ngangokunokwenzeka, zivikelekile, ukuze ufinyelele udinga nje ukubhalisa.
I-IPTV Sports Lists (Ibuyekezwe ngo-2022)
Uhlu lwe-IPTV yaseSpain (Lubuyekezwe ngo-2022)
Uhlu lwe-Latin IPTV (Lubuyekezwe ngo-2022)
Uhlu lwe-IPTV Yabantu Abadala +18 (Kubuyekezwe ngo-2022)
Uhlu lwama-movie we-IPTV (Lubuyekezwe ngo-2022)
I-IPTV Series Lists (Ibuyekezwe ngo-2022)
Ungabona ezinye iziteshi ezithile ezihlokweni ezilandelayo:
Uhlu lwe-TV lwamahhala nolubuyekeziwe lwe-Exabyte
I-IPTV Extreme Lists yamahhala futhi ebuyekeziwe
Uhlu Lwamahhala Nolubuyekeziwe Lwe-M3U Yabantu Abadala IPTV
Uhlu lwamahhala nolubuyekeziwe lwe-Latin M3U IPTV
Uhlu lwamahhala nolubuyekeziwe lwe-IPTV M3U Movistar
Uhlu lwamahhala nolubuyekeziwe lwe-IPTV Smarters Pro
Ulumisa kanjani uhlu lwamahhala lwe-IPTV
Amathuba okumisa i-Smart TV, uhlelo lwe-PC noma uhlelo lokusebenza lweselula luyamangalisa. Akunqunyelwe ku-Smart TV ukubuka i-TV, kuhle kakhulu.
Ngo-2022, lezi zinkundla ezikude nezibuyekeziwe zinezinsiza zesofthiwe ezihambisana cishe nawo wonke amadivayisi.
Ukusho izibonelo, kunezinhlelo zama-PC anoma yiluphi uhlelo lokusebenza. Ku-Windows PC kunezinye izindlela zama-32-bit kanye nama-64-bit processors, akhokhelwayo namahhala, kanye nama-PC anobuchwepheshe bokudlala nge-HD ngenxa uhlu olubuyekeziwe lwamahhala lwe-m3u.
Endabeni yama-Smart TV, kunezinhlelo zokusebenza zomdabu zemikhiqizo edume kakhulu yama-Smart TV. Isibonelo, izinhlelo zokusebenza ezibuyekeziwe zama-Smart TV asekela i-TV ekude inikeza izinhlelo zokusebenza ze-Samsung, Philips, Sony, Hisense, Panasonic, ne-LG.
Futhi ngaphezu kwezinhlelo ze-PC ne-Smart TV, kumaselula kanye naku-Apple TV noma ku-Android Box uyophinde uthole izinhlelo zokusebenza ezibuyekeziwe ukuze ujabulele lokhu okuqukethwe.
Abazifelayo ngamakhompuyutha nesinema. Unjiniyela Wekhompyutha ozama ukwenza impilo ibe lula kubathandi bamamuvi, uchungechunge nokubuka noma iyiphi i-TV ku-inthanethi.
Sawubona, ungaba kanjani nohlu lwe-ottplayer, ngimusha kulokhu. Ngiyabonga
Ekhasini le-OTTPlayer: https://listaiptvtelevision.com/ottplayer-listas-gratis-para-pc/
sawubona kusihlwa, ngingathanda ukubhalisa kodwa angazi kanjani, ngiyabonga
u-edilberto arcila uthi:
Uhlu lwe-Meu olunomnenke kanye ne-rcn oluzinzile futhi olumahhala
Ngifuna into ezinzile mahhala, anginendaba noma ngiyayibuka, noma isikiwe yonke iminithi ikufanele.
uhlu lwe-ssiptv lwamahhala
ngingaluthola kanjani uhlu lwe-m3u lwe-kodi
Sawubona, ngiyakuhalalisela, nginomona omuhle
Kuthinteka kanjani ukuwa kwe-Xtream?
Ngingaluthola kanjani uhlu lwe-ssiptv??
Sawubona, ngicela ungidlulisele i-URL ye-SSIPTV, ngiyabonga?
okuyinto i-iptv ezinzile kakhulu ngeziteshi engihlala nginenkinga nge-telemundo, i-univision njll
Ngicela ungitshele ukuthi ngiyixhuma kanjani i-siptv yami ohlwini lwakho?? Ngibonga kakhulu
Ngidinga izinhlu ze-ssiptv zemidlalo yeligi yeSpanishi nesiNgisi, othile ongangisiza noma ukwabelana ngekheli ngiyacela...!
ngingawathola kanjani amakhodi e-itv e-tv
ngiyaxolisa ngamakhodi e-itpv, ubani engingamthinta ngemeyili ukuze ngithole amakhodi wamadivayisi nawe-tv
Ngiluthola kanjani uhlu lwe-iptv lwe-smart tv
Ngifuna izinhlu ze-iptv ze-smart tv
sawubona ukuze ukwazi ukubuka ibhola lase-Argentina mahhala
Uzithola kanjani izinhlu ezivuliwe… Ngivela e-Nuevo Leon, e-Mexico… nge-Smart TV yami?
Raul Rios uthi:
Ungangazisa uma i-codi isasebenza.. ngiyabonga
sawubona ungangidlulisela i-url ye-ssiptv ngiyabonga
sawubona ekuseni ngisanda kuba yilunga manje ngilibuka kanjani ifomula yokuqala
ngiyabonga kakhulu mauro from uruguay
Sawubona lapho. Ngingathola Uhlu Lwamahhala Lwe-AppSSiptv lwe-LG TV, ngiyabonga
Sawubona, sikhona isicelo sokubuka iziteshi ezivela e-Uruguay, Argentina, ibhola lebhola le-android 9.0 tv box
u-manuel benites uthi:
Sawubona umbuzo omuhle ngingaba kanjani nohlu lwamahhala lwe-iptv
Unganginika uhlu lwe-iptv lwamashaneli ezingane namamuvi 2020
Ngidinga i-IPTV ejulile eneziteshi ezivela e-Argentina uma ekhona owaziyo ngicela angibhalele
Ngibheka uhlu lwamashaneli avela e-China, Hong Kong, Taiwan...
Ingabe ikhona iwebhusayithi oyaziyo enazo?
Siyabonga futhi okuhle kakhulu.
UJOHN SANCHEZ uthi:
PR SICELA UHLU lwe-M3U lwe-DUPLEX IPTV
Ngicela ukwazi uhlu lweziteshi ze-ss iptv zaseColombia
Kunganjani ngingathanda ukwazi ukuthi ukulanda uhlelo lokusebenza okungelona olomdabu ku-smart tv kungalimaza idivayisi yami
Ingabe usho ukuthi idalwe onjiniyela bangaphandle? Cha, ifana nefoni ye-Android, noma yini oyilanda ku-Google Play Isitolo kwakhiwa inkampani okungeyona eye-Android.
ithini i-url ye-tyc sports?
Okungaba okuzinzile kakhulu anginankinga nokukhokha inqobo nje uma kungayeki
Sawubona, ngine-Sony Bravia futhi angikwazi ukufaka noma yiluphi uhlu lweziteshi zeSpanishi noma zesiLatini, ngihlala ngithola i-Conexion Yehlulekile, ngicela ungisize? Ngiyabonga
Ngicela ungisize kanjani uhlu lweziteshi?
Unohlu lwazo zonke iziteshi ze-premium ze-iptv lapho compi.
Sawubona, nginguWilson Betancourt.
Ngivela e-Colombia, ngine-quadriplegic ngenxa yengozi eminyakeni engaphezu kwengu-20 edlule, futhi anginawo umabonakude wezintambo ngenxa yezinkinga zezomnotho.
Ngifuna ukuthola uhlu oluyimfihlo lwe-m3u oluzinzile noluhlala njalo, lwe-smar tv
ngamashaneli aphezulu, kodwa angikwazanga kungakhathaliseki ukuthi ngizame kanzima kangakanani.
Ngicela ungifundise ukuthi kwenziwa kanjani, ngingabonga phakade.
phendula. [i-imeyili ivikelwe]
Sawubona, ungangidlulisela uhlu lokubuka i-F1 mahhala?
© 2022 ListaIPTVtelevision.com · Wonke Amalungelo AgodliweInqubomgomo Yemfihlo Isaziso Sezomthetho contacto Umgomo Wamakhukhi Singobani?